दलाल संसदीय व्यवस्थामा जनताको दयनीय स्वास्थ्य अवस्था : कलम सिह विश्वकर्मा ‘दिपेन्द्र’ – JanaSanchar.com
दलाल संसदीय व्यवस्थामा जनताको दयनीय स्वास्थ्य अवस्था : कलम सिह विश्वकर्मा ‘दिपेन्द्र’
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७७ बैशाख १२, शुक्रबार) ११:१६
नेपालमा अहिले दलाल संसदीय व्यवस्था छ‌‌ । दलाल संसदिय व्यवस्थाभित्र भ्रष्टाचार, कमिसन र दलालीको खेल चलिरहेको छ । सरकार आफ्नो विवेकले होईन बिदेशी शक्तिको ईसारामा चलिरहेको छ । वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेप तिब्र भएको छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालको आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक, सामरिक सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य मानिसहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सम्बेदनशील क्षेत्र हो । दलाल संसदीय ब्यबस्थाले स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । नेपालमा १२५ अस्पतालहरु, ३८४ आयुर्बेद अस्पताल तथा औषधालयहरु समेत जम्मा ४५१५ स्वास्थ्य संस्थाहरु रहेका छन् । केन्द्रीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईलाका स्वास्थ्यचौकी र स्वास्थ्यचौकीहरु रहेका छन् । सरकारले अस्पतालहरू व्यवस्थित गरेको छैन । प्रयाप्त औषधी, जनशक्ति र स्वास्थ उपकरणहरूको व्यवस्था छैन । गरिब जनताहरू उपचार नपाएर छट्पटिदै बस्नु परेको कहाली लाग्दो अवस्था छ । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निशुल्क धोषणा गरेपनि जनताले सिटामोल पाएको छैन । राज्यले जनतालाई मिठा कुरामा भ्रमित बनाउने काम गरेको छ । दलाल संसदिय व्यवस्थाको भनाई र गराईमा, सिद्धान्त र व्यवहारमा, कुरा र काममा भिन्नता छ ।
मानवजीवनमा स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मानिसहरूले चाहेका कुनै पनि शारीरिक र मानसिक काम गर्न निरोगी स्वास्थ्य आवश्यक हुन्छ‌ । राष्ट्रलाई स्वस्थ नागरिकको आवश्यक पर्छ । स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुराबाट नै स्वास्थ्यको महत्व कति छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो देशको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था नाजुक देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन 2018 मा प्रकाशित गरेको वर्ल्ड हेल्थ स्टाटीस्टिक्स अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिलाख २५८ आमाको गर्भ सम्बन्धि समस्याबाट निधन हुने गरेको तथ्यांक छ ।किशाेरी अवस्थामा बच्चा जन्माउनेमा नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी छ ? क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र मधुमेह रोगबाट ३० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका २१.८% नेपाली नागरिकहरु मुत्यु भएको देखिन्छ । ५ वर्ष मुनिका ९.७% प्रतिशत बालबालिकालाई कुपोषणको समस्या देखिन्छ । धुलो, धुवाँका कारण प्रदुषण बढेको छ । अति प्रदुषित मुलुकहरुमध्ये नेपाल पहिलोमा पर्छ । सरसफाईबाट हुने मुत्युदरमा पनि नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो स्थानमा छ । सरसफाईको अभावमा प्रतिलाखमा १९.८% मानिसहरुको मुत्यु हुने गरेको छ ।
नेपालको जम्मा २७% प्रतिशत मानिसहरूले स्वस्थ खानेपानी प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक बिपत्तिको कारण निधन हुनेमा नेपाल विश्वमा नै पहिलो देशमा पर्छ । नेपालमा प्रतिलाखमा ७ जना मानिसहरुको मुत्यु प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने गरेको तथ्यांक छ ।नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा माथिका तथ्यहरूबाट मोटामोटी स्पष्ट हुन्छ ।
स्वास्थ्यमा माफियाकरण भएको छ । स्वास्थ्य सेवा गरिब जनताको पहुँचमा छैन । कोरोना महामारीको संकटको बेलामा पनि निजि अस्पतालहरुले गेटमा ताला लगाएका छन् । अस्पतालको गेटबाट बिरामीहरु फर्किन बाध्य भएका छन् । मुनाफाको लागि खोलिएका निजि अस्पतालहरूलाई नागरिकको के मतलब हुन्छ र ? मानिसहरुको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने काम निजि अस्पतालका कतिपय सञ्चालक र स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट नै भएको देखिन्छ । मरेको मान्छेलाई आईसियुमा राख्ने मात्र होईन मौका परेपछि पित्तथैलीको सल्यक्रिया गर्न आएकाकाे बिरामीको किड्नी चोरेर विदेश पठाउने र पैशा कमाउने पनि गर्छन् । कतिपय बिरामीहरू उपचारमा लागेको रकम तिर्न नसक्दा हस्पिटलको छतबाट हाम फाल्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय बिरामीहरु उपचार नपाएर मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा हुन्छन् ।कतिपय झुपडीमा बस्ने नागरिकहरु रोगले छट्पटिदै मुत्यु सँग लड्न बाध्य हुन्छन् । देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्रीहरु र पार्टीका शिर्ष नेताहरु बिरामी हुदा देश भित्र र देश बाहिरका सुबिधा सम्पन्न अस्पतालहरुमा उपचार गर्छन् । राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा पनि नेपालमा हुनेखाने र सत्तासिन वर्गको लागि मात्र भएको देखिन्छ ।
संसदिय व्यवस्थाले स्वास्थ्यलाई सेवामुलक भन्दा पनि नाफामुखी बनाएको छ । सेवाभन्दा पनि नाफाको लागि खोलिएका निजि अस्पताल सञ्चालकहरुले राज्यलाई कमिसन दिने र नागरिकहरुलाई लुट्ने काम गरेका छन् ।राज्यले निजि अस्पतालहरुको सँरक्षण गरिरहेको छ ।सरकारी अस्पतालमा अावश्यक पर्ने औषधिहरु, जनशक्ति र उपकरणहरुको अभाव छ । सरकारी अस्पतालमा पनि सामान्य नागरिकहरुले सहज ढंगले उपचार पाउने अवस्था छैन । राज्यको उच्च तहमा पहुँच भएका मानिसहरूको उपचार सजिलै हुन्छ भने पहुँच नभएका बिपन्न मानिसहरूको उपचारमा समस्या हुने गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । स्वास्थ्यको सामाग्री खरिद, औषधिहरु खरिद र अन्य स्वास्थ्यको अनुदान रकममा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । कोरोना माहामारीबाट नागरिकहरु पिडित भएको बेलामा मुलुकको स्वास्थ्यमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा मुछिनुले नेपाल र नेपाली जनता लज्जित हुनुपरेको छ ।
केन्द्रीय तहमा कथित कम्यूनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार छ । मुलुकका ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा कथित नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । मुलुकका ७५३ वटा स्थानिय तहहरु मध्ये अधिकांश स्थानिय तहरुमा‌ सरकारको नेतृत्व पनि गरेको छ ।नेपाली जनतालाई सुखी र देशलाई धनी बनाउने सपना पनि बाडेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताहरुका समस्याहरु दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएका छन् । स्वास्थ्यको मात्र कुरा गर्ने हो भनेपनि स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन महङ्गो हुदै गएको छ । स्वास्थ्यलाई नाफामुलक बनाईएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रयाप्त औषधिहरु, स्वास्थ्य उपकरणहरु र आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ । स्वास्थ्य गरिबहरुको पहुँचमा छैन । कमिसन र दलाली बढेको छ । यी सबै समस्याहरुको समाधान खोज्न जरुरी छ । स्वास्थ्यलाई निशुल्क बनाउनुपर्छ । निजि अस्पतालहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा अावश्यक जनशक्ति, औषधिहरु र स्वास्थ्य उपकरणहरुको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सबै किसिमका रोगहरूको उपचारमा गरिबहरुको पनि पहुँच हुनुपर्छ । वर्तमान दलाल संसदीय ब्यवस्थाबाट स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरुको समाधान हुन सक्दैन । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्र नेपाली जनताको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या हल हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन सम्पुर्ण जनता एकजुट हुनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।
लेखक: नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी, दैलेख इन्चार्ज
(२०७७ बैशाख १२, शुक्रबार) ११:१६ मा प्रकाशित